दुई पांग्रेमा ८० प्रतिशत कर, कुन मोटरसाइकलको मति कर बढ्यो?(सूचीसहित) | Seto Khabar
दुई पांग्रेमा ८० प्रतिशत कर, कुन मोटरसाइकलको मति कर बढ्यो?(सूचीसहित)
दुई पांग्रेस सवारीमा भन्सार, अन्त शुल्क भ्याटलगायत गरी करिब ८० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ। सरकारले चालु आवको बजेटमा सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार दस्तुर र सवारी साधनको वार्षिक कर वृद्धि गरेको छ। यो खबर हामीले आजको कारोबार दैनिकबाट लिएका हौ।
कुन मोटरसाइकलको सडक कर कति पुग्यो?
– १२५ सिसिसम्मको मोटरसाइकल- १० हजार
– १२६देखि २५० सम्म-१२ हजार
– २५१देखि ४०० सम्म-१५ हजार
– ४०१देखि माथि सबै-२० हजार
कुन मोटरसाइकलको वार्षिक कर कति पुग्यो?
– १२५सिसि सम्म-२५ सय
– १२६-२५० सम्म- ४ हजार
– २५१देखि ४०० सम्म- ८ हजार
– ४०१देखि माथिका सबै- १५ हजार